Mogadishu Journal » 2017 » December » 22
Mjournal :-Shirka sedexdii bilba mar qabsooma ee Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka (MoCA Forum) ayaa maanta si habsami leh uga furmay magaalada Garoowe, waxaana shirka furay Madaxweyne Ku-Xigeenka Puntland Mudane Cabdixakiim Xaaji Cumar Cameey. Kulanka maanta ee MoCA Forum...
Mjournal :- Kooxda Jubbaland ayaa galabta ku guuleysatay Tartanka maamul goboleedyada dalka, kadib markii ay 1-0 uga adkaatay kooxda Puntland. Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Reaysal wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre , Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha marwo...
Mjournal :-CabdiSaciid Maxamed Cali oo ah Aqoonyahan ayaa loo magacaabay La Taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha, kaddib wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweyne Farmaajo. Warar ay Warbaahintu heshay aayaa ogaatay in CabdiSaciid loo magacaabay xilkan, waxaana markii ay soo...
Mjournal :-Shirka sadexdii bilba mar qabsooma ee Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka (MoCA Forum) ayaa maanta si habsami leh uga furmay magaalada Garoowe, waxaana shirka furay Madaxweyne Ku-Xigeenka Puntland Mudane Cabdixakiim Xaaji Cumar Cameey. Kulanka maanta ee MoCA Forum...
Xulka kubadda cagta ee Jubbaland ayaa ku guuleystay Tartanka Ciyaaraha maamul goboleedyada, kaddib markii ay ciyaartii Finalka 1-0 uga badisay xulka Puntland oo tartankan ku guuleystay sanadkii hore. Jubbaland ayaa ka aarsatay Puntland oo sanadkii hore ka qaaday, waxaana maanta...
Mjournal :-Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa sheegay in ay u baahan yihiin Dhaqaale deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo si looga guuleysto dagaalyahannada xogaga Al-Shabaab. Ergayga Gaarka ah ee Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya Francisco Caetano Madeira ayaa...
Mjournal : -Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dadaal ugu jira sidii Golihiisa Wasiirada codka kalsoonida uga heli lahaayeen Xildhibaanada, kaddib markii shalay uu dib ugu laabtay magaalada Jowhar. Madaxweyne Waare ayaa xalay kulamo la lahaa Xildhibaanada...
Mjournal :-Madaxa Golaha Xukuumadda maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo la hadlay waraabinta ayaa warbixiyay mideynta maamulada Glamudug iyo Ahlu Sunna, kadib markii dhowaan ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Muqdisho. Wuxuu sheegay wax lagu farxo in ay...
Mjournal :-Guddoomiyaha gobolka Benaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa ku baaqay in ciidamada ammaanka ee gobolka Benaadir si toos ah loo hoos keeno maamulka gobolka si wax looga qabto ammaanka caasimadda. Xeer lambar Laba ee soo baxay sanadkii 1963 ayaa amraya in hay’adaha amaniga...